I-25 EPHOLILEYO YEENWELE ZEENWELE ZAMADODA (ISIKHOKELO SE-2021) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda I-25 ye-Braids yeenwele zamadoda
IiBraids zamadoda sele zithandwa kwiminyaka yakutshanje, nangona abafana abaneebhondi babedla ngokubabiza ngokuba ngamacorner. Kangangeminyaka, amadoda ayeziva ngathi ama-French braids yayingummandla wasetyhini, kodwa alukwa…
IiBraids zamadoda sele zithandwa kwiminyaka yakutshanje, nangona abafana abaneebhondi babedla ngokubabiza ngokuba ngamacorner. Iminyaka, amadoda ayeziva ngathi ii-braids zase-France yayizizizinda zabasetyhini, kodwa iinwele ezolukiweyo ziwela loo mda wesini ngesitayile kunye ne-flair, ngakumbi xa udibanisa ukuphela kunye neebraids. Izitayile zokuluka zamadoda zezinwele ezintsha ezipholileyo, kwaye imeko eya ngasezinweleni ezinde ivule izitayile zokuluka kubadlali bezemidlalo kunye nehipsters ngokufanayo.
Amadoda abhinqileyo ancothula iinwele zakudala kubafana kwaye njengendoda, iinwele eziphothiweyo zamkelekile ngokwasentlalweni. Ukuba unobude obude obuphakathi kweenwele ezinde kwaye kufuneka uzigcine zingaphandle kwendlela yezemidlalo okanye yomsebenzi, jonga ii-braids zamadoda ngendlela eqhelekileyo yokubamba iinwele zakho. Nazi iinwele eziphezulu ezipholileyo zeenwele zamadoda zokukukhuthaza!
imifanekiso ye tattoos yokakayi
1Yintoni Indoda eyoBolwayo?
MbiniYintoni Endiyifunayo Kumntu Oqhoshayo?
3Ungazilungisa njani iinwele zakho
4Eyona Ndoda eNtsha yokuLuka iiNwele
Yintoni Indoda eyoBolwayo?
Indoda elukhuni, ekwabizwa ngokuba iikona zamadoda ngaphakathi koluntu olumnyama, yinto entsha epholileyo yeenwele zamadoda ezichaphazeleka lilifa lakudala. Izitayile zeBreyidi zifuna ukuthatha iinwele kunye nokwenza uyilo ngokuyiluka kunye kwiipateni ezintsha. Isiseko esisezantsi saseFrance sibonakalise ukuba sesona sithandwa kakhulu kuba sisebenza kwizinwele ezimfutshane nezinde.
Iinwele ezigqityiweyo zokuluka ziya kwahluka ngokuxhomekeka kuhlobo lweenwele zakho kunye nobukhulu, kodwa indoda eyolukiweyo yimbonakalo yanamhlanje, enesitayile ehambelana nobume bobuso. Abafana abanesikwere, unxantathu, idayimani kunye nobuso oblong bafaneleke kakhulu kwintloko epheleleyo yeebhondi zamadoda.
Inye into epholileyo malunga nabafana abanee-braids kukuba isitayile sinokubonelela ngeyona nto ibalaseleyo kwihlabathi liphela. Xa idityaniswe ne-taper fade haircut emacaleni nasemva, ukuphela nge-braids kunika amadoda ukubukeka kwesitayile okwendoda okwangoku. Ukuba unesimbo sefashoni sokuxhasa ii-braids zamadoda, sicebisa ukuba uzame iinwele eziphothiweyo kube kanye ukutshintsha inkangeleko yakho.
Yintoni Endiyifunayo Kumntu Oqhoshayo?
Iibhokisi zomntu zifuna iinwele ezininzi kunye nobude, njengoko amacandelo efuna ukugqagqana ukuze enze isitayile esithandwayo. Ubuncinane i-intshi ezi-3 ukuya kwezi-5 zeenwele ezishinyeneyo ziyimfuneko, kodwa ukuba uneenwele ezimfutshane emacaleni (umz.ukucheba iinwele okufipheleyo), iinwele ezingaphezulu zinokulukwa. Iinwele ezinde ezivumela ukungqinelana kwesitayile zezona zilungileyo zokulukwa. Kwabafana abathandayo abapholileyo, ubude beenwele ezifanelekileyo zii-intshi ezi-5 okanye ngaphezulu njengoko oku kunika ithuba lokuzama uyilo oluneenkcukacha kunye nolwahlukileyo lweenwele.
Ngapha koko, enye ipomade okanye ijeli iyakunceda ekubambeni ii-braids endaweni, kwaye kubaluleke ngakumbi ukuba uneenwele ezimtyibilizi eziwa ngaphandle kwesitayile ngokulula. Ikama elungileyo okanye ibrashi inokukunceda ekufumaneni imigca ecocekileyo eyimfuneko yokwahlula iinwele zokuluka, kunye nokuhambisa iinwele kuluncedo ukuba ufuna ukubukeka okucocekileyo kunye neenqwelomoya ezimbalwa ezibalekayo, iinwele ezinqabileyo. Okokugqibela, iqhina leenwele lisetyenziselwa ukubopha isiphelo sokwaluka kunye nezikhonkwane ze-bobby zinokunceda ukugcina iinwele zicocekile imini yonke.
Inye into ekufuneka uyiqaphele kukuba amanye amadoda anxiba ii-braids ezomeleleyo zihlala zinokulahleka kweenwele. Ngenxa yokuba iinwele eziphothiweyo zinokutsala nzima kwi-follicle yeenwele, sicebisa abafana ukuba bazame ezinye iinwele kube kanye. Okanye ukunqanda ingxaki iyonke, ii-braids ezikhululekileyo ezingatsali kwi-scalp lukhetho olungcono kunee-braids ezixineneyo.
Ungazilungisa njani iinwele zakho
Ukufunda indlela yokuluka iinwele zakho kunokuba yinkohliso ekuqaleni, kodwa emva kokuziqhelanisa okuncinci, ukwaluka akuyi kuba yingxaki. Ubunwele baseFrance yindawo elungileyo yokuqala, njengoko sisiseko sokwenza uyilo oluntsonkothileyo lwamadoda. Amadoda abhinqileyo amaFrentshi abandakanya ukongeza ngokuthe ngcembe kumacandelo eenwele ukuhambisa ubreyidi ngasemva kwentloko.
Ukuluka iinwele zamadoda, landela le miyalelo:
Qala ngeenwele ezimanzi, ezomileyo ngetawuli. Hlanganisa icandelo leenwele ongathanda ukuziluka ngasemva kwentloko yakho.
Icandelo elingaphambi kweenwele zakho ngekama kwaye uzahlule libe yimicu emithathu.
Qalisa ukukrwela iinwele ngokudlula kwi-strand yasekunene ngaphaya kwe-strand esembindini, emva koko umtya wasekhohlo ngaphaya kwe-strand yeziko elitsha. Phinda kabini.
Hlanganisa umtya omtsha weenwele ukusuka kancinci ukuya ngasemva kwentloko yakho, kwicala lasekhohlo. Yongeza le nywele kumtya wasekhohlo. Gqitha yonke i-strand yasekhohlo ngaphaya kwe-strand yeziko.
Phinda ngokudibanisa umgca kwi-strand yasekunene. Qhubeka uluka, ngokutshintsha ukongeza imicu emitsha yeenwele ukusuka ekhohlo nasekunene kweenwele zakho.
Qhina de uphelelwe ziinwele kwaye ubambe ngetayi yeenwele.
Sebenzisa ipini ye-bobby kunye nemveliso ethile yeenwele ukuze ucoce naziphi na iinwele ezisindayo.
Qaphela: ukuba iinwele zakho zikwicala elifutshane (ii-intshi ezi-4-5), kuyakufuneka ubambe ngokuqinileyo ukuze ubambe isitayile kunye.
Eyona Ndoda eNtsha yokuLuka iiNwele
Izitayile ezithile zamadoda zokwaluka kufuneka zibonwe zikholelwa kwaye ziphindaphindwe. Ngapha koko, kukho amakhulu ezinto ezintsonkothileyo zokuyila ekunokukhethwa kuzo, kwaye amadoda anokuzinxiba kanye njengabafazi.
Ukunceda abafana ukuba bafumane ezona ndlela zilungileyo zokuluka, siqokelele ingqokelela yamadoda abhinqileyo. Igalari elandelayo yeefoto zabafana abagungqisa ii-braids zabo zinokukunika inkuthazo yeentlobo ezintsha ze-braids ukuzama.
ukuvumisa ngeenkwenkwezi ukunyuka uphawu
iipomades ezingcono zeenwele ezintle
inkqubo yendlu ngeenkwenkwezi
ingxelo ye-synastry yasimahla
iimveliso zeendevu ezingcono zamadoda amnyama
isimbo seenwele zomntu omnyama